Canada oo sheegtay inay heyso caddeymo muujinaya in Iran soo riday diyaaradda Ukrain - Jowhar Somali news Leader
Home News Canada oo sheegtay inay heyso caddeymo muujinaya in Iran soo riday diyaaradda...
Canada oo sheegtay inay heyso caddeymo muujinaya in Iran soo riday diyaaradda Ukrain
Ra’iisul Wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sheegay inay hayaan caddeymo muujinaya in diyaaraddii laga lahaa dalka Ukraine ay ku soo dhacday gantaal ay rideen Ciidanka Iran.
Justin Trudeau ayaa sheegay in loo baahan yahay in baaritaan dhameystiran lagu sameeyo, isagoo tilmaamay in sirdoonka dalkiisa iyo kuwa xulafada la ah ay hayaan caddeymo muujinaya in Iran soo riday diyaaradaas.
“Caddeymo aan ka helnay sirdoonka xulafadeena iyo kuweenaba waxay muujinayaan in diyaaradda dhacday uu soo riday gantaal ay gantay Iran, waxayna arrinta ahayd mid si ula kac ah loo sameeyay”ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Canada.
Diyaaradda laga lahaa dalka Ukraine ayaa waxaa saarnaa illaa 176 rakaab, kuwaasoo kala bar u dhashay dalka Canada.
Warbaahinta Mareykanka ayaa tabiyay in diyaaradda ay ku soo dhacday gantaal ay la dhaceen Ciidanka Iran, taasoo aheyd si kama’a ah, xilligii ay duqeynayeen Saldhigyada Mareykanka ku leeyahay dalka Ciraaq.
Dowladda Ukraine ayaa ka dalbatay dalka Canada inay kala qeyb qaadato baaritaano caalami ah oo lagu sameeyo diyaaradda soo dhacday iyo sababta ay la dhacday, kaddib markii ay soo baxeen wararka ku saabsan in gantaal ay riday Iran ay ku dhacday.